Ogaden News Agency (ONA) – KT Meles oo ku hanjabay inuu maleegayo afgambi
KT Meles oo ku hanjabay inuu maleegayo afgambi
Posted by ONA Admin	/ April 5, 2011
Somalida ayaa marka ay arkaan qof masuuliyadiisii intuu gabay meela kale sii haahabanay waxay ugu maahmaahaan Habartii xaabada qaadi weyday ee mid kale ku darsatay. Hadda KT Meles waxaa laga soo sheegay inuu yidhi waxaan ka shaqaynayaa sidii afgambi loogu samayn lahaa madaxweynaha Eretreeya. Wuxuuna sida ay ka warisay wakaaladda AFP ku eedeynayaa inay taageeraan jabhadaha ka soo horjeeda gumaysigiisa ee OLF iyo ONLF iyo waliba shabaabka Somaliya.
Waxaa hadalkan ka horeeyay inuu dhowr todobaad ka hor yidhi dagaal ayaan ku qaadayaa Eretreeya hadaanay joojinin wuxuu ugu yeedhay faragalinta ay ku hayso maamulkiisa. Waagaa ayay khubarada aqoonta u leh xoogaga military ee dalalka waxay sheegeen inuusan lahayn hadda awood ciidan Meles Zinawi uu ku weeraro Eretreeya, hadday sidaa dhacdana uu kala kulmayo khsaare balaadhan oo laga yaabo inay soo dhaawacdo xukunkiisa.
Warkan uu siiyay saxaafadda ee wakaaladda AFP ay soo xigatay ayuu KT Meles sidoo kale ku eedaynayaa dalka Masar inay hoosta kala jirto Ertreeya oy ku soo shidayso, wuxuuna sidii dhaqanka u ahayd handaday Masar isagoo leh dan uguma jirto arintaa. Markasta oo Itobiya ay ka hadlayso xidhiidhka ay la leedahay Masar waxay soo qaadaa wabiga Nile oo ah nolosha dadka Masar, wuxuuna xasuusiyay Meles sida waayadanba socotay inuu biya-xidheeno isdaba yaala ka samayn doono daantiisa wabiga Blue Nile suu uga cunaqabateeyo Masar xagga biyaha.
Arimahan oo idil waxay astaan u yihiin dhibaatada haysata KT Meles oo hadda dareemay inuu xukunkiisa gabaabsi ku jiro.
Wuxuu marayaa meel aad khatar u ah oo laga yaabo in la afganbiyo hadaba, sidee buu u haweysan karaa dawladda shatafta leh ee Eritrea. Waxaan aaminsanahay in uu ku socdo bohoshii uu ku dhici lahaa.
waa uun lax gawracani geeda kama weecato, dhiigya cab males haduu eega leeyahay shirqool baan u maleegayaa Eeitrea, ninkii tiisa hanta ayaa tu kale wax taarta ama wax yeeleeya, kacdonka iyo karka Adis ababa ka jira ayuu u maara la`yahaye… iimaanka alla ha ka qaadee cid uu wax yeeli karaa ma jirto, kan cad-ceediisii way dhacday.